SAMSAM " AQALKA M. KU-XIKEENKA I GEE"
Boqol sano ka hor markii miyiga iyo magaaladu kala war la' aayeen , ayaa marka ruux reer miyi ihi yimaado magaalda ayuu odhan jiray" kuriga hebel ee reer hebal ha la i tuso ama ha la igeeyo" . Xiligan aan joogno miyiga iyo magaaladu waa isku mid , oo BBC iyo satalite TV ayay dhagaystaan ama dawadaan reer miyigu.
Hadaba Samsam oo reer magaala wax walbana kala garanaysa, ayaa ah wax lala yaabaabo in ay tidhaa "Taksiilow i gee Aqalka m. ku-xigeenka " . Haddii aanay qorshe iyada iyo taksiilihii isku ogaayeen oo ah in ay arin fuliyaan aanu jirin , ayaa ah waxa is waydiin mudan , maxay Samsam ku keentay taksiilow i gee aqalka m. ku-xigeenka, iyada oo aanay waxba ka dhaxayn oo aanay qaraabo ahayn, ama aanu ahayn abtigeed ,adeerkeed ama seedigeed ?
Maanta adduunka meeshu doono qofku joogee , iskama odhan karayo ama waa wax aan dhici karayn in qof yidhaa taksiilow i gee aqalka m. ku-xigeenka Ruushka ama Franciiska, hadii aanu qorshe ama arin fulinaynayn.
Waxa wax iswaydiin kale mudan maxaa ka keenay Samsam i gee aqalka m. kuxigeenka? jawaabta ayaa ah sidan.
Horta Samsam hadii ay u bugtay araga M. kuxigeenka, tahayna qofka reer magaala oon ka soo galin miyi, meelo badan oo ay u mari kari lahayd araga m. kuxigeenka ayaa jiray, waxa ay u mari lahayd xildhibaanada, xafiisyada dawladda iyo meelo badan , haddii uu araga m. kuxigeenku daacad ka ahaa.
Waxase aad moodaa markii uu qorshihii ay waday iyada taksiiluha u socon waayay in intii wax la ogayd , ay arinkii markii uu fashilmay ay u badaleen in askartii qabatay ay kuf satay, si ay arintu u yeelato waji kale iyo dacaayad lagu aafeeyo Somaliland.
Haddii ay Samsam fulinaysay fal argagaxso runtii waxa ay ahayd qof fulin kara , sababta oo ah way shareernayd ama xijaabnayd , markaa way ogayd in si dhib yar oon fiirsasho ama shaki lahayn ay u dhaafi karaysay askarta, madaama ay xijaabnayd, inkasta oo askartii ilaalada m.kuxigeenku joojiyeen markii ay garan waayeen ama ka shakiyeen, taas oo ay ku amaanan yihiin. Ayna dhici karayso in ay ku qabteen hub ama baastoolad ay wadatay si ay u fuliso qorsheegii ay u socotay.
Xijaabka ama shareerka ayaa noqoday ama ahaa , habkii ay u dileen argagaxisadii dishay haweenaydii reer Keenya ninkii Jarmalka ahaana ku dhaawacay , falkii ay fuliyeen wadada isku xidha Barbara iyo Hargaysa.
Madaama aanu qof miyir qabaa ama kala garanaya khalad iyo sax ,ayaanu isga odhan karayn hebel ii geeya hadii aanu wadan qorshe, ayaa la odhan karaa in ay Samsam fal argagaxiso waday ama aanay miyir qabin iyada iyo taksiilihii wadayba.
Dacaayadda , beenta iyo brobagaadha ay wadaan kuwii wax la ogaa Samsam , ayaa u eg arin aanu qof miyir qabaa ka aqbalayn, marka aynu dib eegno falalkii argagaxiso ee hore uga dhacay Somaliland.